Mesut Ozil Oo Arsenal Ka Helay £8 Milyan Oo Gini Oo
Musut Ozil hal kulanna uma ciyaarin Arsenal muddo dhawr bilood ah, laakiin haddana joogitaankiisu waxa uu dhibaato ku yahay kooxda oo khasaare lacageed kasoo gaadhay.
Sida uu qoray wargeyska The Athletic, Ozil ayay Arsenal siisay dhamaadka bishii September lacag gunno ah oo gaadhaysa £8 milyan oo gunno ah, taas oo qayb ka ahayd heshiiskii ay Arsenal la saxeexatay bishii January ee 2018kii ee ay doonayeen inay ku qanciyaan inuu sii joogo Emirates.
Kubbad-sameeyaha reer Germany oo sannadkii 2013 ay Arsenal kaga soo iibsatay Real Madrid lacag dhamayd £42.5 milyan oo Gini ayaa shan sannadood kaddib oo ku beegnayd 2018 waxa uu qandaraaska usii kordhiyey kooxdiisa kaas oo dhigaya in illaa June 2021 uu sii joogi doono Emirates iyadoo uu mushar ahaanna u qaadanayo toddobaadkii £350,000 Gini.
Sida uu wargeyskani sheegay, Arsenal ayaa heshiiskii ay Ozil u cusboonaysiinaysay waxay ku dartay qodob u waajibinaya lacago dheeraad ah oo ka baxsan mushaharkiisa xad-dhaafka ah, taas oo sababta loogu ogolaaday ay ahayd in lagu qnaciyo inuu sii joogo.
£8 milyan oo Gini oo lacagtaas aan ku jirin heshiiskiisa ayaa Ozil uu helay bishii September dhamaadkeeda si uu heshiiskiisu u waajibanayay, waxaana uu ku helay jiifka iyadoo aanu bilihii ugu dambeeyey hal daqiiqona u ciyaarin Gunners.
Tababare Mikel Arteta ayaa Ozil ka reebay liiska ciyaartoyda kooxdiisa ee tartanka Europa League ciyaari doonta, waxaanay kooxdu raadinaysaa sidii ay u heli lahayd xeelad ay iskaga dirto Ozil oo ku adkaysanaya inuu heshiis kula jiro, haddii ay noqoto in la burburiya qandaraaskiisana la siiyo lacagta uu mushahar ahaanta u qaadanayo sannadka u hadhsan oo caddadkeedu ku dhowaanayo £18 milyan oo Gini.
many national hostages held in the Sahel along with Westerners
The previous Somalia president says he returned the stolen public